Degmada Mubaarak Iyo Kalfadhigii 8aad Ee Golaha Xildhibaanada. - Cakaara News
Degmada Mubaarak Iyo Kalfadhigii 8aad Ee Golaha Xildhibaanada.
Mubaarak(Cakaaranews) khamiis, 18ka August, 2016. Waxaa maanta ka furmay hoolka shirarka ee magaalada mubaarak ee xarunta degmada mubaarak kalfadhigii 8aad ee golaha xildhibaanada degmada mubaarak.
Kalfadhigan ayaa waxa ka soo qaybgalay gudoomiyaha degmada mubaarak mudane Cabdiraxmaan Maxamed Daahir, afhayeenka golaha xildhibaanada degmada mubaarak mudane Xuseen Aadan iyo dhamaan xubnaha golaha xildhibaanada degmada mubaarak.
Waxaana furitaankii kalfadhigan ka hadlay afhayeenka golaha xildhibaanada degmada mubaarak mudane Xuseen Aadan oo ugu horayntii si kooban uga warbixiyay waxqabka sanad miisaaniyeedka 2008TI ee xafiiska golaha xildhibaanada degmada mubaarak. Afhayeenka ayaa ka warbixiyay anjandayaasha lagaga hadlayo kalfadhigan oo ay ka mid tahay dhagaysiga iyo ansaxinta warbixinta waxqabadka maamulka degmada mubaarak ee sanad miisaaniyeedka 2008TI.
Gudoomiyaha degmada mubaarak mudane Cabdiraxmaan Maxamed Daahir ayaa soo jeediyay warbixinta waxqabadka maamulka degmada mubaarak ee sanad miisaaniyeedka 200TI. warbixintaa oo ku salaysnayd fulinta qorshayaashii iyo istaraatajiyadihii horumarineed nabadgalyo iyo maamulka suuban ee u dajisanayd maamulka degmada mubaarag iyo guud ahaanba guulaha laga gaadhay dhinacyada adeegyada horumarineed ee bulshada ayaa markii uu goluhu dhagaystay warbixintan, lagana dooday ayaa waxa lagu meel mariyay cob buuxa. Gudoomiyaha ayaa waxa kale oo uu soo bandhigay qorshayaasha horumarineed ee u dajisan maamulka degmada mubaarag sanadka 2009TI.